Filtrer les éléments par date : dimanche, 08 décembre 2019
dimanche, 08 décembre 2019 19:42
Kitra - COSAFA U20: Madagasikara 1 # 1 Afrika Atsimo
Nirava ady sahala, 1 noho 1 ny Barea an’i Madagasikara sy ny Bafana Bafana Afrikanina Tatsimo, androany tao Zambia.
I Madagasikara no nampidi-baolina voalohany, tamin'ny alalan'i Avizara (55'), raha toa ka samy tsy nisy nitoko ny roa tonta teo amin’ny fizaram-potoana voalohany, izay vao nosahalain’ny Afrikana Tatsimo.
Voahosotra ho mpilalao mendrika nandritra iny lalao iny i Balvano, mpiandry haraton’ny Barea an’i Madagasikara.
Samy nahavita lalao faharoa avy izao ny ekipa roa tonta. Ny nosy Maorisy no ekipam-pirenena manaraka hifandona amin’i Madagasikara, raha i Lesotho kosa no ho adverseran’i Afrika Atsimo.
dimanche, 08 décembre 2019 18:36
Fanafihan-jiolahy tao Ankazondandy sy Sadabe: Zandary iray amperinasa notazomina atao famotorana
Nitrangana fanafihana mitam-basy tao amin’ny Kaominina Ankazondandy sy Sadabe ny alin’ny 2 desambra 2019. Zandary iray miasa ao Sabotsy Namehana ahiahiana ho tafiditra tamin’ity fanafihan-jiolahy ity.
Samy nanondro azy avokoa ny olona efatra tamin’ireo niharam-boina rehetra nataon’ny zandary avy amin’ny Kaompania Imerina Centrale ny fifanatrehana ny 5 desambra 2019. Narahina fisavana ny tranon’ilay zandary izany, ka nahitana tranom-bala iray, ody gasy, akanjo « blouson » hoditra mainty nampiasainy tamin’ny fanafihana.
Notazomina avy hatrany anaovana fahadihadiana io zandary io amin’izao fotoana.
dimanche, 08 décembre 2019 18:26
Oniversiten’i Vakinankaratra: Namoaka andiana manampahaizana manana diplaoma « Master »
Namoaka ny andiany voalohany ho an’ny diplaoma « Master » ny IES-AV Antsirabe na ny « Institut d’Enseignement Supérieur Antsirabe-Vakinankaratra”, izay rantsan’ny oniversiten’Antananarivo.
Miisa 83 ireo nahazo mari-pahaizana « Master » mandrafitra ny andiany « Mamiratra », raha toa ka « Misandratra » koa ireo nahazo marimpahaizana “Licence”, izay andiany faha-3.
Antsiranana: Nikija ny orana, ranobe eran’ny tanàna
Ilay rivodoza « Belna » no mandrafitra ny toetr’andro eto Antsiranana. Mbola mavesabesatra ny lanitra io tolakandro io ary manomboka avy be ny orana, taorian’ny orana nijojo hatramin’ny alina. Saika dibodrano ny ankamaroan’ny tanàna Antsiranana tampon-tanàna.
dimanche, 08 décembre 2019 17:52
Amoronakona: Nisy nangalatra ny tarobia mitondra herinaratra mampihodina ny toby famokaran-drano
Lasibatry ny mpangalatra ny tarobia mitondra herinaratra mampihodina ny toby famokaran-drano eny Amoronakona. Ny alin’ny sabotsy hifoha androany alahady no nisehoan’ny halatra, araka ny fampitam-baovaon’ny Jirama.
Vokan’izany dia miato ny fanaovana andrana famatsian-drano an'Ambohimangakely - Ambohimahitsy sy ny manodidina.
Efa mandray ny andraikiny amin'ny fanoloana io tarobian-jiro io ny Jirama mba hahafahana manohy ny andrana famatsian-drano ataon'ity toby ity.
dimanche, 08 décembre 2019 15:34
Herinaratra: Hivahiny eto Madagasikara ny Mpandrindra ny « Power Africa »
Hitsidika an’i Madagasikara ny Mpandrindra ny tetikasa « Power Africa » an’ny governemanta amerikana, Atoa Andrew M. Herscowitz, ny 8 hatramin’ny 11 desambra 2019.
« Power Africa » dia fiaraha-miombona antoka eo ambany fiadidian’ny fitondram-panjakana amerikana izay arindran’ny Sampandraharaha Amerikana Misahana ny Fampandrosoana Iraisam-pirenena (USAID).
Toy ny fifidianana rehetra niseho dia tsapa fa nisy tokoa ny lesoka, ny tsy fanarahan-dalàna isan-karazany, ny fividianana ireo delegen’ny hafa. Nisy ireo lisi-pifidianana tsy tomombana, sns… hoy i Masy Goulamaly, Solombavambahoakan'i Madagasikara voafidy tao amin’ny Distrikan'i Tsihombe, Faritra Androy.
« Fa ity lesoka iray ity no tena tsy azo leferina, dia ny fanomezana kara-panondro zaza tsy ampy taona ary an-jatony maro, izay asaina mandatsa-bato, satria hono voasoratra ao anaty lisitry ny mpifidy», hoy i Masy Goulamaly.
dimanche, 08 décembre 2019 15:24
Célébrée le deuxième dimanche de décembre.